केहि लेख्न मन लाग्यो « Sansar News
केहि लेख्न मन लाग्यो
२७ जेष्ठ २०७७, मंगलवार १६:३८
२०२०/५/२२ का दिन नेपालबाट नेपाली ध्वजाबाहक बिमानमा कर्मभूमि जापान आउने मौका पाएँ । २०१९ को डिसेम्बर महिनाको २५ तारिख कर्मभूमि जापानबाट जन्मभूमि नेपाल जाने मौका मिलेको थियो २ महिना पछि फ्रेबुअरी २२-२३ तिर फर्कने हिसाबले गएको थिएँ । कोभिड र बिबिध समस्याका कारण समयमा जापान फर्किन सकिन । त्यसपछि पटक पटक फेसबुकमा भेटिएका बिभिन्न जापान र नेपाल संघ सम्बन्धित ट्राभल र ब्यक्तिगत एजेन्ट जस्ता देखिने खालका एडहरू र सामाजिक सन्जालमा आउने खबरहरू हेर्न थालेँ । यी यस्ता खबर र सुचनाहरू हेर्दै मन मनै हास्थे र सँगै रिस पनि उठने गथ्यो एकतर्फी नेपालबाट जापान जानका लागि मात्र १३ सय बाट २५ सय अमेरिकी डलरसम्मको टिकटको रकम सुन्ने गर्थेँ । तैपनि जाउ कि भनेर टिकट काट्न लाग्यो । टिकटको रकम १३ सयबाट बढ्न सुरू हुन्थे र बढेको रकम १६ सयमा पनि जान्छु भन्दा पनि लास्टमा टिकट नै छैन सकियो वा हामीले जापान जाने स्विकृती नै पाएनौ अब अर्काे हप्ता उडनेमा तपाईलाई हालि दिन्छौ । यी यस्तै कुराकोे चक्करमा अरू बढि १ महिना नेपालमै बसेर एनआरएनएहरुको मुना कृषि पब्लिक लिमिटेड कम्पनिका तर्फबाट सफा र स्वस्थ तरकारी र फलफूलको सेवातर्फ लागियो ।
जब एनआरएनए जापान र जापानस्थित नेपाली राजदूताबास समेतबाट यसको पहल गरेको समाचार सुन्न पाएँ । खुसि हुँदै पुरानै हामिलाई सेवा दिने सस्था सुमेग ट्राभलमा कल गरे । त्यहाँबाट पाएको सुचनाका आधारमा पहिले अरूले लगेको भन्दा सस्तोमा लाने र नाफाको केहि अंश कोभिड (केरोना) बाट जापानको एनआरएनए संघ मिलेर नाफा रकमको केहि अंश पिडितलाई सहयोग गर्ने कुरा मैले बुझे । म र म जस्तै अरु समाजसेवि नेपालीहरूलाई यो भन्दा खुसिको कुरा अरू के हुन सक्छ र यसै कुरालाई सिरोपर गरि मैले सुमेघ ट्राभलको स्टाफबाट युएस डलर १२ सयमा टिकट किने । बिल म संघ आज पनि सुरक्षित छँदैछ ।
मैले सुने अनुसार र मेरो जानकारी अनुसार पहिलो चार्टर फ्लाईटमा 2500 USD Business class 1800 USD मा इकोनमी class को पैसा तिरी नेपालीहरु जापान आएका छन् । यो काम नेपालस्थित जापानी राजदूतावासबाट भएको रे भन्ने सुनेको छु । त्यसपछि यति धेरै रकम तिरेर नेपालीहरू जापान जान असहज हुने देखेर एनआरएनए जापान र बिबिध ठाउँबाट भएको पहलबाट सुमेघ ट्राभलले १२ सयमा जापान लगेको र अझै यसबाट हुने नाफाको केहि प्रतिशत एनआरएनए जापानको सहकार्यमा नेपाल सरकारको कोरोना सहयोग संंकलन कोषमा जम्मा गर्ने भन्ने कुरासुनेर मैले १२ सयको टिकट लिएर सुमेघ ट्राभलले सन्चाल गरेको अन्तिम २२ तारिखको उडानबाट जापान आएँ ।
अहिलेको समय परिस्थिती अनुसार यो ट्राभलले गरेको काम अति सराहनिय लागेको छ किनकि के नेपालमा बसेर भिसा सकिन लाग्दा नेपाल सरकारले भिषा थपि दिएर जापान पठाउने केहि प्राबधानहरू छन् ? यदि थियो भने सरकार र यी त्यस्त संस्थाहरूलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
तर जस्ले पछी चार्टर गरि पहिले तिरेको भन्दा आधा मुल्यमा जापान ल्याईदिनु भो भन्ने समाचार पढन पाएँ । तर यात्रुलाई सहज भएको कुरा त कतै पनि सुन्न सकिएन जसले यी यस्ता बिबिध समस्याले भिसा सकिने काम सकिने व्यवस्था ब्यापार/बिजनेसहरू डामाडोल हुने विद्यार्थी भाइबहिनिहरुको रोजिरोटि भिसा र काम आदि सबैको जोखिम हुने जस्तै भिसा सकिएर वेरोजगार हुनु बाध्यता रहनु पर्ने आदि समस्याबाट सबै जना बच्नु भएका छन् । त्सैले कुन ट्राभल्सले कति पैसा लियो भन्ने मात्रले अर्थ लाग्दैन होला ।
तर समय परिस्थती अनुसार मेरो बुझाई अनुसार कुनै पनि जहाज उडाउँदा नाफा घाटा भन्दा पनी व्यवसायिक विश्वसनियताको कुरा हुन्छ यस्तो असहज बन्दाबन्दी अवस्थामा नेपालका कुना कुनाबाट कसरी सहजिकरण गरि यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पु¥याए भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हुन् । सरकारले गरेको भए आज यस्तो अबस्था आउने थिएन । त्यहि सुमेघ या कुन अरू ट्राभलबाट काम गराउदा सरकार भन्नेहरू र नेपाल एरलाइन्सका हाकिमहरूको पोल्टो भरिने भएकोले यो यस्तो कामहरू नेपालमा भएका हुन् ! हाम्रो सरकारले सरकारी तवरबाट कहिकतै केहि काम गर्दैन । किनकि बढि पैसा कुम्लाउन पाइदैन । तलबमा कामगर्ने कर्मचारीहरू पनि नेपालमा छैनन् । भोट लिएर काम गर्ने नेताहरू पनि नेपालमा छैनन कोहि ब्यापारी आयो सबै मिलायो अनि मिलाएर खायो । सबै घुस खाने कर्मचारी देखि नेतासम्म सबै चोखो अनि दस ठाउँमा गएर दसजनाको गुलामी गर्दै तपाई हाम्रो काम गर्ने आफ्नो २,३ करोडको बाजि लगाएर तपाई हामिलाई जापान पुराइदिने ब्यापारी आज चोर हुने ! कार्बाही त्यसैलाई गरिने अरू मुख्य चोरहरू पहिले नै बचेर बस्ने ! यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा बरबाद हुने भयो । नेपाल एरलाइन्स सधै यसैगरि डुबाउने कर्मचारी र नेताहरू सबै चोखो भए आज समाचार पढ्दा लाग्यो नेपालले झण्डै १५०० जनाको रेमिट्यान्स र वेरोजगार भार बोक्नु परेन । १५०० परिबारको पेट भोको हुनु परेन भन्ने कुराको ज्ञान कसलाई छ र । यदि यो संस्थाले हामिलाई जापान ल्याउने काम नगरेको भए यहा न अरू कसैले यस्तो काम गथ्र्याे न कसैलाई यो तरिका नै थाह थियो । आफू केहि नगर्ने जब अरुले केहि राम्रा काम गर्न खोज्छ अनि उसको खुट्टा तान्न खोज्ने नेपालीहरूको नेपाली प्रबृति जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म हामिले नेतालाई र सरकारलाई गाली गरेर मात्र हुने वाला केहि छैन । त्यसैले मिलेर काम गर्ने बानी बसालौ । देश बिकासमा सहयोग पु¥याउँ ।
बिगतमा एनआरएनए जापानको भइपरि आउने सामाजिक कोषको लागि म आफै अध्यक्ष भएको संस्था अध्यात्मिक सेवा केन्द्र जापानले जापानमा त्रिदिबसिय भागबत पुराण लगाएर तेसबाट उठेको सत प्रतिसत रकम हामिले एनआरएनए जापानको यसै कोषमा जम्मा गरेका थियौ । अब हेर्न बाकि छ कि यो ३,४ वटा फ्लाइटबाट आर्जेन गरेको रकम बाट के कति रकम सुमेघ ट्राबलले एनआरएनए जापानको कोबिट वा एनआरएनए जापानको हाम्रो भइपरि आउने सामाजिक काम कार्यको कोषमा अब कति पैसा जम्मा हुनेछ । त्यो हेर्नु बाकिनै छ ।
आसा छ यो हिसाब लाइ पारदर्सिताका रूपले हेरेर यसबाट जम्मा भएको रकम जापानमा कोरोना बाट या बिबिध समस्या बाट पिडित नेपीली साथिहरूको सहयोगका लागि कोषे ढुडंगा साबित हुनेछ ।
एनआरएनए जापान, नेपाली राजदुतावास जापान, बिबिन्न सहयोगि सबै तह र तप्काका मित्रहरूलाइ धन्याद ।
र सुमेघ ट्राबलले एनआरएनए जापान संघ के कस्तो लिखित, मौखिक या सामाजिक के कस्तो सम्बन्धका साथ काम गरेको छ त्यो आफ्नो बचनबाट पर जाने छैन र छिट्टै हिसाब किताब लिएर सहयोग रकमका साथ हाजिर हुनेछ भन्ने बिस्वासमा तपाईहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिदै छिटो भन्दा छिटो फेरि हामीले तपाइको सेवा र सहयोग पाउने छौं भन्ने आसाका साथ नितान्त मेरा मनका कुराहरूलाई यति मै बन्द गर्दछु ।
(थापा गैरआवासीय नेपाली अभियन्ता हुन्)